トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Umahluko-nkqubo zoshishino ngenxa indawo pa parlour (Agents Station & kwiivenkile ipoma)
Nawuphi na ivenkile, ndicinga ukuba ukwenza ushishino izixhobo ezahlukeneyo iimeko site. Pa kungekho ngaphandle, siba amanyathelo ahlukeneyo kwaye ezahlukeneyo, ishishini kunye nokwenziwa ngokwabo umfanekiso wabo okugcina iimeko site. Ngokomzekelo, phambi kwiivenkile zesikhululo kunye noovimba ezisezidolophini umahluko iimpawu ezinkulu. Makhe uthelekise umahluko ngexesha kwisiseko yomthengi kunye nokusebenza nencopho kaThixo.
■ nesendlu pa ukwenza ishishini kummandla ngexesha
Station phambi isikhululo pa nakwesiphi na isiseko abaxhasi nencopho nokubaleka, ezivenkileni basakulungele ezininzi zendlela edolophu ngeenyawo. Kuba isondele kwisikhululo sikaloliwe, kunye nabasebenzi ofisi ekhaya kunye abadala nekhaya indlela emsebenzini evela nabafana kunye namabhinqa, silindele isiseko umxhasi iindidi asemaphakadeni. Ingakumbi, le yokuziphatha kuyinto eqhelekileyo ngakumbi evekini. Kule ngokuhlwa ukususela kusasa, kungcono, ezifana angaphangeliyo kwaye abaninzi abadala, iya kuba ingakumbi umfazi band kuvame ixesha.
Kodwa phambi kwenu kukusebenza isikhululo incopho bobabo banjalo ukusuka apha. Ukusuka ngaphandle umva ngokuhlwa ungcono, nto leyo eye ngokuza evenkileni ukususela kusasa
, ngendlela indawo, abasebenzi salaried emva komsebenzi uza kuqalisa eli xesha lokuba akhawunti ukuba isininzi msebenzi. Ngokutsho kweli xesha, yintoni nengeniso olukhulu kwesiseko umthengi kukuthi, 's ifitsha inkulu phambi evenkileni zesikhululo.
shop apho kukho ixesha namali imisebenzi zwi, kuba kukho abathengi ukuba akangebuyi kulahlwa nkqu ngesisekelo esinamandla, uya kuba njengenye kuzo ukhetho kuba aim apho.
kwisikhululo komsindo phambi khuphiswano, ivenkile akakwazi umdla abathengi-7 emva kwemini okanye 8 emva kwemini evekini 6 nentsimbi, iye ukusinda kuba nzima.
(※ Ngendlela, ukuba evenkileni kufuneka nyenyisa ibhola ngaphandle ntoni nge ROM Yara Horukon, ukhetho kukuba ukukhetha le izowuni yexesha.) _ x000D_
Noko ke, ngokuba holiday abasebenzi salaried na iholide, ukusebenza yayina nangokuhlwa ukususela kwintsimbi yeshumi elinambini, ziya kuba ukuhamba ezahlukeneyo ngokupheleleyo kunye ngeentsuku zeveki. Ukongeza, kuba ivenkile ukhuphiswano rhoqo, kamsinya nje ibhola ngaphandle nezinye iivenkile, umsebenzi uya kutshintshwa lukhulu.
■ ipoma pa parlour lwabathengi isiseko kunye nenani Ekuhambeni zone kwexesha
yokusebenza unqakrazo, bathi ntoni eqweba ipoma, musa ukuba ubungakanani isiseko nabaxhamli malunga Station evenkileni. Ethetha labathengi, noyise wakho ekhaya ebumelwaneni kunye ukuphumla, ubudala kwakhona kwi ukuphakama, sibona eninzi imbonakalo yomntu, ezifana 60s ukusuka 40.
ziindwendwe inqanaba lolwazi liphantsi kakhulu, kuba zininzi, kukho ezininzi okunentsingiselo ayinanto kamnandi itheyibhile kwesiseko esomeleleyo uhlengahlengiso isikhonkwane.
nje ayikho yokutyela ethandwa ngokwanele lokubiza udaba kwi Amadlelo zegumbi pa, ngubani yokupaka ityelelwa ngemoto okanye isithuthuthu okanye ezifana, kukho, Akuthethi abaluleke kakhulu, kangangokuba kwanabo izayo ukuya evenkileni ukusuka kwiiyure ekuseni ukuba ezingaphi na imeko.
isininzi, kuba xa uhlala ebumelwaneni bakho uzayo evenkileni, ukubaleka kuqala zobude ngentsimbi 12 phambi nasemva kwemini, imveliso eliyincopho kuya kuba kwiivenkile ezininzi malunga 3:00 emva kwemini kwi-1 emva kwemini. Kwaye, ivenkile wena ipoma kukho umahluko omncinane phakathi ukusebenza incopho ngaphakathi usuku lweveki. Nokuba kukho ivenkile ezikhuphisanayo, kuba akukho nto kufutshane, kulula ukubeka abathengi ezisisigxina.
ukuba asebenzise kakuhle ekulweni Ngokusekelwe kwezi mpawu ???
1. Kwakhona siphathwe izowuni yexesha
ezingoovimba indawo kwincopho, ngenxa yokuba ixesha apho lo msebenzi sandisiwe yahlukile, apho njengomnye yeqhinga kukuba ukukhetha off ixesha lishushu emini. Njengoko elibe pa, Kakade ke, ngenxa yokuba lo mntu ekhuphe ibhola ngaphandle eninzi xa kukho izinga ukusetyenziswa eliphezulu akwenziwa nesibheno ukuxhotyiswa, akubanga sasijonge apho.
2. Xa ixesha apho ixesha
baxhamli watshintshela ukukhuthazana ziya kuthanda itheyibhile elimnandi kwesiseko esomeleleyo isikhonkwane kusenokwenzeka ukuba. Oku kungenxa yokuba, umzekelo, kwimeko ekhaya, yaye oko kuya kuba enoba zibhubha unamandla, ngoko musa ukuba ukulungiselela isidlo, ndiya kuba abantu abaninzi ukuba wayeza kabuhlungu. Pachipuro ahlawulelwa qhinga eya kuphatha iqonga elinjalo nayo ikhona. _x00 0D_
3. Ngu uphando inqanaba ulwazi
umthengi isiseko abathengi, nto iqondwa ukuba inqanaba abaphulaphuli lowo. Level kukho kwakhona Kungenzeka ukuba kwinqwanqwa engenanto okumnandi phantsi abantu badla uthenga. Kakade ke, isibakala sokuba abantu kwinqanaba eliphezulu nokude umntu, kodwa oko kungenzeka ukuba babe yokuba ivenkile ngokwayo akukho ukungcamla, Sajikagen wamacala uya kuphela khazimlisani amava ngokulwa ngeke.